Ngisiphi isikhathi uMsindisi we-Apple? Usuku loMsindisi we-Apple ngo-2016
Okunye Amaholide I-Spas
Ukugubha uMsindisi we-Apple 2016. Ukubamba kanye nezibonakaliso
Umsindisi we-Apple ungomunye wama-spas amathathu amaKrestu okhetha ukugubha. Leli holide libizwa nangokuthi usuku lokuguqulwa kweNkosi, liwela ngo-Agasti, limisa ukuphela kwehlobo elishisayo nokufika kwekwindla evundile.
Lapho uMsindisi we-Apple 2016 egujwa
Ngosuku luni uMsindisi we-Apple owela ngo-2016? Qaphela ukuthi usuku lweholide ngeke lushintshwe, futhi i-Orthodox minyaka yonke igubha umkhosi we-Agasti 19.
Umlando wensindiso uchazwa eVangelini. Ngokwesiko, ngaphambi nje kokubethelwa kwakhe, uJesu Kristu wabutha abaphostoli abathathu, uJakobe, uPetru noJohane, futhi kanye nabo bavuka baya entabeni ephakeme iThabori. Lapho esefikile emhlanganweni, uKristu waqala ukuthandaza, futhi abafundi bakhe, bekhathele ukukhuphuka ende entabeni, balala. Lapho bavula amehlo abo, babona uMsindisi ngokukhanya okukhulu, izingubo zakhe zazingcwelile kuneqhwa, futhi eceleni kwakhe kwakukhona abaprofethi ababili abakhulu - u-Eliya noMose. Ngemva kwesikhashana abaphostoli bezwa izwi livela ezulwini, owathi la mazwi alandelayo: "Lo uyiNdodana yami ethandekayo. Yilalele. " Abafundi bakaKristu bawa phansi phambi kobukhulu balelizwi, futhi lapho bephakamisa amakhanda abo, iNkosi yabo yayimi yedwa. Ngakho iNkosi yabonakalisa inkazimulo yaKhe, yembula abaphostoli ukuthi uyiNdodana kaNkulunkulu uJesu. Lo mcimbi wawuwumthombo ekubukeni komkhosi wokuguqulwa kweNkosi.
UMsindisi we-Apple: Amasiko nezinkomba
Kukholelwa ukuthi awukwazi ukuvuna ama-apula ezihlahleni kuze kube usuku lapho uMsindisi we-Apple eqala khona. Ngo-2016, njengalezo zonke ezinye iminyaka, lolu suku luwela ngo-Agasti 19. Kukhona ngisho nesibonakaliso sokuthi isoni esiphulile isithelo se-apula ngemuva kokuba iholidi lifike, lizowela ePharadesi. Namuhla, abantu abambalwa bakholwa yizibonakaliso, kodwa, noma kunjalo, abalimi abaningi bayazama ukuvuna ama-apula ngaphambi kosuku olubekiwe.
Futhi kukhona inkolelo yokuthi izithelo ezithathwe emithini e-Spas zinezindawo zokuphulukisa, futhi uma uphatha izithelo ezingcwele zomuntu ogulayo, uzobuya ngokushesha. Kukholelwa ukuthi i-apula, ediliziwe kwi-Spas, iletha inhlanhla. Izithelo kufanele zenziwe zibe izingcezu ezincane, zome elangeni bese zihlakazeka kuzo zonke izingxenye zendlu noma indlu.
Ngaphambili sithole ukuthi iyiphi inombolo uMsindisi we-Apple we-2016 ophumayo. Lolu suku emadolobheni amaningi luzobekwa uphawu lokuvula ama-fairs. Ezimweni ezinjalo, ungathenga ama-apula avuthiwe ahlukahlukene ahlukahlukene, uju olumnandi, izinkumbulo ezihlukahlukene neminye imikhiqizo eminingi enentshisekelo.
Ngokwesiko, ngokufika kweMsindisi we-Apple, umnakekeli ulungiselela izitsha ngalesi mkhiqizo esihlwabusayo futhi ewusizo. Izithelo ziyadliwa njengezihlanzekile, zihambisana noju olumnandi, futhi ziyisebenzisela ukupheka izimpahla eziphekiwe, ama-saladi nezinye izinto. Kumele kuqashelwe ukuthi, ngokwezifiso, ama-apula athathwa kuqala ukuphatha izihlobo nabangane bawo, futhi emva kwalokho kukhona okungokwabo. Kukholelwa ukuthi uma uqoqa izithelo engadini yakho bese upha abanye abampofu, ngonyaka ozayo ungathola isivuno esihle. Amakholwa kuleli holide kumele ahambele isonto futhi ambulele uNkulunkulu ngakho konke abanakho.
Bheka futhi: Usuku Lwezinkampani Zomoya Ngo-2016 .
Iyini i-Nut Spice 2016? I-Holiday Scene
Ukuphila okumnandi: lapho ukugubha i-Honey Spas
I-West Highland White Terrier
Kungcono kanjani ukunqoba i-hangover?
I-cheesecake ku-oven microwave
Imicabango, ukudala injabulo yabesifazane
Indlela yokufeza umgomo: izimfihlo ezintathu zesisusa esifanele
I-Cod ebhakawa ngamakhambi kanye no-anyanisi: iresiphi evela kumculi uJasmine ngenani elincane
Ukudla okunempilo kwabantwana ekhishini lokubisi
Yini ukupheka ngokushesha futhi okumnandi?
Imvelo yamawele owakhulela emndenini owodwa
Ukudweba umcibisholo ophelele phambi kwakho
Spring Break 2015 - lapho uya khona, ukuthi wenzeni
Ukuphupha ngezipikili zakho noma ezinye